KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Niman Afka soo duubtay oo Dilal ka wada Caasimada
Sunday 25 March 2012 08:10
Niman Afka soo duubtay oo Dilal ka wada Caasimada
Muqdisho (Keydmedia) - Rag la sheegay in ay ku hubeysnaayeen Bastoolado oo wajiyada soo duubtay ayaa xalay wiil dhalinyaro ahaa ku dilay Sarta Catarka ee u dhaxeysa Xaafadaha Labo dhagax iyo Baar ubax ee magaalada Muqdisho halka mid kalana ku dhaawaceen halkaasi.
Labada wiil oo isla socotay ayaa midka dhaawacmay waxaa loo qaaday Isbitaal sida ay inoo sheegeen qaar ka mid ah Eheladiisa oo aan la xiriirnay.
Macadda sababta ka dambeysa dilka iyo dhaawaca dhalinyaradaani oo la sheegay in ay ahaayeen dad shacab ah, iyadoo goobta ay ka baxsadeen kooxihii falkaasi gaystay.
Dhinaca kale waxaa la sheegay in nin kale lagu dilay meel aan sidaasi uga fogeen halka uu dilka ka dhacay ee Xaafadda Baar ubax kaasi oo aan la ogayn waxa uu yahay iyo cida dishay.
Maalmihii u dambeeyay waxaa kusoo badanayey xaafadda Baar ubax iyo xaafadaha u dhow dilal qorsheysan oo aan la ogayn cida ka dambeysa kuwaasi oo dowladda oo halkaasi maamusho aysan wali wax ka qaban.